5 WWE mashura makuru akaba mafambiro avo - Wwe
5 WWE mashura makuru akaba mafambiro avo
Kupedzisa mafambiro uye siginecha inofamba zvimwe zvezvikamu zvikuru zvepro wrestling. Chokwadi, zvese zvakanyorwa asi ndiani angakanganwa kumhanyisa kweadrenaline iwe paunoona Randy Orton achirova imwe yeRKOs yake? Wrestling yehunyanzvi ingadai isina kukwana pasina kufamba uku.
kuvimba sei nemumwe munhu mushure mekunge akurwadzisa
Asi, kune zvakare akaganhurirwa nhamba yekufamba kunowanikwa kune pro wrestlers kuti vanogona kuita zvakachengeteka uye vachiri kuita kutaridzika kunoparadza. Imhaka yechikonzero ichi kuti vanoverengeka mashura vanopedzisira vaba ivo vanopedzisa ivo vega.
Vanhu vakaita saAJ Styles naFinn Balor, vanozvivakira mafambiro avo, vashoma mazuva ano uye pane kushamisika kushoma kana iwe ukaona mumwe munhu achishandisa iye chaiye anopedzisa seumwe munhu, aine rimwe zita rakasiyana.
Nhasi, isu tiripano kunyora mashura makuru avo vaenda nekuba nekuda kwavo pundutso. Saka, pasina imwezve ado, heino runyorwa rwe5 WWE superstars akaba mafambiro avo:
ungaziva sei kana musikana achikuda
# 5 Bret Hart
Inotaridza kujairika, kwete?
Sharpshooter ndiye Bret Hart's iconic anopedzisa. Iyo ndeimwe yeanonyanya kuyeukwa mafambiro kune chero munhu akaona Iyo Hitman ichiita, uye pane kusahadzika kushoma kuti anogona kuibvisa zvirinani kupfuura chero munhu mupenyu.
Iyo Scorpion Deathlock ndeye Sting's iconic yekupedzisa. Iyo ndeimwe yeanonyanya kuyeukwa mafambiro kune chero munhu akaona Iyo Stinger ichiita, uye pane kusahadzika kushoma kuti anogona kuibvisa zviri nani kupfuura chero munhu mupenyu.
kuita nharo zvakajairika muhukama
Iwo mafambiro maviri anotaridzika zvakafanana eerily. Saka, ndeupi musiyano uripo pakati pezviviri? Hapana, sekureva kwaSting, uyo anonzi ndiye akatanga danho revateereri vekumadokero mushure mekuzvidzidza panguva yake muJapan.
Saka, hongu. Iyo Sharpshooter kubvarura kubva kuScorpion Death Lock, uye vhezheni yaSting iri kwazvo yepakutanga
zvaunofanira kuita kana iwe uchinetseka kumba wega
murume anondiranga semwana mudiki
maitiro ekuziva kana ndiri akanaka
kutamba nesimba kuti upinde muhukama